Hebei Jiake Izixhobo zeNtsimbi ye-Heakei, Inc.
Gxila kwimveliso yoomatshini be-wire mesh
Izisombululo zoomatshini eziguqukayo kunye netekhnoloji ye-weld Advanced kumashishini
JIAKE Oomatshini-Best brand umenzi wocingo oomatshini e China
Iminyaka engama-20 yokuhlakulela amava ngokuqhubekekayo kumzi mveliso woomatshini abaziingcingo.
Ukubekwa kolungelelwaniso olugunyazisiweyo kwimfuno yakho ethile yemveliso.
Hebei Jiake Welding Equipment Co., Ltd. yasekwa ngo-1999 kwaye ibekwe kwilizwe Anping, kwiphondo Hebei, China. Yindlela yomatshini wokuhombisa ngesisombululo se-wire mesh kwaye uzibophelele ekuboneleleni ngesisombululo se-mesh yokusetyenziswa kwabasebenzisi behlabathi.
Emva kweminyaka engaphezu kwengama-20 yophuhliso oluqhubekayo kunye nokuyila, oomatshini be-JIAKE baye baba ngabenzi abakhokelayo base China bezizixhobo zetayile. Kwinkalo ye ekupheleni-ekupheleni wocingo kwemveliso zentsimbi, Jiake oomatshini iye yaseka iteknoloji phambili ukuwelda kunye nobungcali. Kwintsimi yoomatshini abasebenzisa i-wire mesh wewing, sikwazile ukumisela iinkqubo ezifanelekileyo zetekhnoloji kunye namaqela eenkonzo zobungcali ngokusebenzisana nabanye abavelisi.
JIAKE Wire wocingo OOMATSHINI
Gxila ekuboneleleni ngesisombululo somatshini wokucheba i-mesh kunye nemeshini yokuhambisa ngomnatha.
-Gxila ekuboneleleni ngesisombululo somatshini owenziwe nge-mesh kunye nomatshini wokuluka umnatha.
Oomatshini be-JIAKE babodwa kuMatshini we-R&D, ukuvelisa kunye nokuthengisa umatshini wokuchaphazela i-Mesh Welding, ifestile yentsimbi ye-Welding Machine, i-Cage Mesh Welding Machine, Ukuqinisa umatshini we-Mesh Welding, Umatshini Wokwenza i-Mesh Ukwenza umatshini, umatshini wokudibanisa iintsimbi, ihexagonal Wire netting Machine, Machine Fence Machine, Umatshini weWebed Wiring, Umatshini weMetwork eyandisiweyo, kunye nomatshini wokuzoba weWire, njl.
Iimveliso kunye netekhnoloji ifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza kuzwelonke, kwaye banesatifikethi seEC, isiqinisekiso seFTA, iFom E, yokuvunywa kweFom. Ipasipoti yomatshini, ukubakho kwesiko akuyi kuba yingxaki.
UKUSUSELA KUNYAKA KA-1999
INDLELA YABANYE BENKONZO
UMSEBENZI OBALASELEYO UKUZE IQELA LABO LIBONELELWE KULABO BABELASI!
Kwiimarike zaphesheya kwezilwandle, oomatshini be-JIAKE bathengise amazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla kwihlabathi liphela.